I-Oasis yangasese enephuli endaweni Enhle Kahle - I-Airbnb
I-Oasis yangasese enephuli endaweni Enhle Kahle
249 okushiwo abanye
**Njengoba kubonakala ku-House Hunters International**
I-Casa Romantica imayelana nemininingwane! Izibuyekezo zisho konke, futhi sikhuthaza izihambeli zesikhathi esizayo ukuthi zifunde wonke amazwana angaphambili avela kwabanye abake bahlala nathi. Ngeke nje ube namagumbi okulala angu-2, amagumbi okugeza angu-1.5, indawo yokuhlala enethezekile kanye nekhishi eligcwele, kodwa futhi ujabulele ichibi lakho langasese, amayunithi angu-2 anamandla e-AC, ama-TV angu-3, i-intanethi ethembekile ye-fiber optic, i-Netflix, amabhayisikili angu-2, imidlalo yebhodi nezincwadi, kanye ne-concierge yomuntu siqu engu-24/7, konke kusendaweni OKUHLE!
Uma ubone i-Casa Romantica ifakiwe ku-House Hunters International, ungase uyazi njenge-Casa de Mullet... ibhizinisi ngaphambili, iphathi ngemuva :)
Awukwazi ukunquma phakathi kwehhotela "likanokusho" elinakho konke ukunethezeka kwekhaya noma ukuzizwisa "okuyiqiniso" ukuqasha indlu yaseNicaragua enezinsiza ezimbalwa? I-Casa Romantica ivala igebe futhi inqobe noma yikuphi ukukhetha ngokunikeza izivakashi ubumfihlo, indawo kanye nobuqiniso bekhaya lamakoloni eqiniso laseNicaragua kuyilapho futhi ihlinzeka ngemininingwane ephakeme engatholakali ngisho nasemahhotela abiza kakhulu aseGranada, wonke asendaweni EMIHLE.
Indlu iyinhlanganisela ephelele yezakhi zomlando zamakoloni kanye nezinsiza zesimanje, futhi yinhle nakakhulu ebusuku. Ama-wall sconces anikeza i-ambiance efudumele egumbini lokuhlala elikhulu, izindawo zengadi nezamachibi futhi amazinga okungcoliswa kokukhanya aphansi aseGranada enza ukubukwa okumangalisayo kwesibhakabhaka ebusuku. Bala izinkanyezi echibini noma ubukele ukuduma kwezulu kwaseNicaragua kusofa onethezekile!
Izibuyekezo ezivela kubavakashi bangaphambilini zisho okungaphezu kwalokho obekungasho noma ikuphi ukufakwa kuhlu, ngakho sikukhuthaza ukuthi ufunde ngamazwana ezivakashi zethu zangaphambilini, kodwa izinto esicabanga ukuthi zenza i-Casa Romantica ibe inketho enhle kakhulu yokuhlala kwakho eGranada yilezi:
Indawo ekahle - esifundeni samakholoni futhi eduze nazo zonke izindawo ezikhangayo, kodwa umgwaqo owodwa kude nomsindo wasebusuku / ekuseni kakhulu, ukuze izivakashi zijabulele ukulala ngokuthula futhi zihambe ziye ezindaweni ezikhanga izivakashi, izindawo zokudlela ezinhle kanye nempilo yasebusuku ngaphansi kwemizuzu emi-5. Umgwaqo ohamba phambili eGranada!
*Qaphela: Ngenkathi i-Calle Santa Lucía ithule kune-La Calzada noma abanye phakathi, izihambeli ezilele ekamelweni elingaphansi zisengawuzwa umsindo othile womgwaqo. Igumbi lokulala eliphezulu lingemuva kwendlu futhi lisesitezi sesibili, ngakho-ke liyasuswa cishe kuwo wonke umsindo, kodwa igumbi lokulala elingaphansi lisezingeni lomgwaqo futhi lingase libe nomsindo owengeziwe, ikakhulukazi phakathi namasonto omkhosi (bheka ikhalenda esigabeni sesithombe) *
Ichibi langasese elingaphakathi / langaphandle - livuleke kancane esibhakabhakeni ukuze lithole ilanga futhi limbozwe kancane ngophahla ukuze kube nomthunzi. Iphuli iqala cishe ngamafidi angu-3 ukushona futhi kancane kancane ifinyelela cishe ngamafidi angu-6 ukushona.
Ama-shades wehla angahlukanisa amachibi kanye nezindawo zokuhlala ukuze kube nomthunzi, ubumfihlo, noma isimo sezulu
Imininingwane yamakoloni njengosilingi ongamamitha angu-30 anomoba ophucuziwe, amathayela aphansi e-Nicaragua enziwe ngezandla, amakholomu okhuni oluqinile, uphahla lwamathayela abomvu kanye nezicabha zasendulo zaseGranada ezisetshenziswa njengomhlobiso endlini yonke.
Okusha (2017) futhi anamandla kakhulu angu-2400 BTU air conditioning units ekamelweni ngalinye ukuze kuphole ngokushesha futhi alale kamnandi.
1800 amashidi wokubala intambo (alethwe esuka e-US)
Izembatho ze-waffle ezithambile ze-monogram (2)
Amakhethini amnyama kuwo womabili amakamelo okulala ukuze alale noma aphumule ntambama
3” omatilasi bezimpaphe balethwe besuka e-US kuyo yomibili imibhede eyindlovukazi (Omatilasi baseNicaragua abawugqinsi ngendlela izihambeli ezingajwayela ngayo ekhaya, futhi omatilasi bakanokusho benza umehluko omkhulu ukuze ulale kahle ebusuku)
Amathawula amakhulu, aluhlaza olwandle atholakalayo ukusetshenziswa echibini, kanye namathawula awugqinsi, athambile okugeza
Amabhayisikili angu-2 ahlinzekelwe izihambeli ngaphandle kwenkokhiso (izikhiya zamabhayisikili nazo zinikeziwe)
Amanzi ashisayo angempela aphuma kubo bonke ompompi (akukho okunamathiselwe ekhanda leshawa kagesi) asho ukufinyelela okuphephile emanzini ashisayo uma edingeka eshaweni nakuwo wonke usinki
Iphampu yomfutho wamanzi eyengeziwe ezosetshenziswa lapho lonke idolobha linendledlana ethile (ikakhulukazi evamile ngezikhathi zasekuseni)
Isibonakude esinesitendi esilungisekayo namalensi amaningi okubuka izinkanyezi ebusuku
Amafenisi osilingi angu-8 agcina umoya uhamba endlini yonke, agcine nezindawo ezivulekile zimnandi futhi ziheleza umoya ngezinsuku ezishisayo.
Abalandeli abangu-2 baphansi (eyodwa ekamelweni ngalinye) banikeza induduzo eyengeziwe
Ikhishi eligcwele: zonke izinto zokupheka namapuleti / i-silverware / glassware, kanye ne-toaster evamile, i-oven toaster, umshini we-espresso, umenzi wekhofi ojwayelekile kanye nezihlungi, i-blender, i-microwave, usayizi ogcwele we-6 burner gas stove kanye ne-oven, usayizi ogcwele wesiqandisi nesiqandisi nge amathreyi eqhwa, ama-tupperware, ama-chopper emifino, izitsha ze-Pyrex, amabhodwe namapani, amabhodi okusika, isethi yommese, izisefo, amashidi amakhukhi, izikhwama ze-Ziploc, izinongo, izivuli zewayini, njll... Konke obungadinga ukuze ujabulele ubusuku futhi upheke at ekhaya!
Izipikha zebluetooth ezingenantambo zokulalela umculo
2 amaphrinta angenawaya abahambi bebhizinisi
3 ama-TV esikrini esiyisicaba (indawo yokuhlala, igumbi lokulala eliphansi, igumbi eliphezulu lokulala) ukuze ukwazi ukubuka iziteshi zasendaweni noma imuvi emakamelweni okulala noma echibini
Iphakheji yekhebula ye-Claro eneziteshi ezingu-100+ kuwo wonke ama-TV angu-3 (ikakhulukazi ngeSpanishi)
I-Roku ene-VPN kuwo wonke ama-TV angu-3 ane-US Netflix, i-Hulu, i-YouTube nezinye izinketho zokusakaza. Lokhu kusebenzisa i-akhawunti yase-US Netflix, ukuze amamuvi nezinhlelo ze-TV zaseMelika naseYurophu zifinyeleleke (ikakhulukazi ngesiNgisi) ngokusebenzisa i-akhawunti ye-Netflix ye-Casa Romantica.
Izivikeli ezihlinzayo zokushaja ama-elekthronikhi ngokuphephile, esikuncomayo ngenxa yokunqamuka kukagesi e-Nicaragua ngezikhathi ezithile kanye nombani
I-Wifi enesivinini esikhulu enamarutha angu-2 ukuqinisekisa uxhumo oluqinile nesiginali (irutha eyinhloko esitezi esingezansi, irutha yesibili phezulu)
5 amathangi amanzi ahlanzekile anikeziwe (futhi agcwaliswa kabusha njengoba kudingeka) mahhala
Imidlalo yebhodi, amakhadi okudlala, izindida, ama-dominoes, isethi ye-ping pong, nezinye izintandokazi ezihlinzekelwe ukusetshenziswa kwezivakashi kukhabethe legumbi lokuhlala.
Izincwadi zokuvakasha nemihlahlandlela, amamephu endawo, amabhuku ezithombe, izincwajana namakhuphoni ezindawo ezikhangayo ezitholakalayo ukuze zisetshenziswe izivakashi eshalofini lezincwadi ze-sala
Indawo yokuwasha (umshini wokuwasha uhlinzekwa, kodwa awekho isomisi sikagesi - ulayini nezikhonkwane zokuwomisa anikeziwe, noma sizokujabulela ukuyisa elondolo lendawo lezivakashi zethu)
I-ayina ihlinzekwa ekamelweni lokulala
Izinto zokugeza (shampoo, conditioner, lotion, shower gel) zinikeziwe
2 usayizi wangempela (1875 watt) okomisa izinwele, 1 i-curling iron, 1 Chi yokuqondisa izinwele
Ukuvikeleka okwengeziwe: Izibani ezikhanyayo ezingu-3 zangaphandle kanye nesango lensimbi elengeziwe emnyango wangaphambili ezivakashini ezifuna ukuvula iminyango yokhuni ukuze zithole umoya noma ukubona ukuthi kwenzekani ngaphandle kuyilapho uzizwa uphephile futhi uvikelekile ngaphakathi (Qaphela: indlu isendaweni ephephe kakhulu endaweni ehamba phambili. street eGranada, kodwa sengeze lezi zinto ukuze sinikeze izivakashi okokuqala ngqa ukuthula kwengqondo)
Izikali zemithwalo zezikhwama zokukala (zihlala ziwusizo ngemva kohambo lokuthenga emakethe yaseMasaya!)
Iminyango eyingilazi engu-5 esitezi esingezansi i-sala ivulekile ukuvumela umoya ohelezayo endlini yonke
Umatilasi wendlovukazi we-Inflatable 24” uyatholakala (ngaphezu kwemibhede eyindlovukazi emi-2 enomatilasi bangempela)
Indawo yasengadini ene-hammock, izihlalo ezi-2 ze-hammock notshani bangempela (sicela unisele amanzi uma uhlala izinsuku ezimbalwa kanye nenkonzo yasendlini eyehlayo)
Ukuphepha kwe-elekthronikhi okuphephile ngamakhodi enziwe ngokwezifiso anikezwe ekamelweni eliyinhloko
Ama-Hangers ahlinzekwa ku-master closet kanti ama-dresser anendawo eyanele yokubeka ahlinzekwa kuwo womabili amakamelo okulala
Ukuntanta kwamachibi namathoyizi, amathawula olwandle, amakhozi, amapuleti epulasitiki nezinkomishi ezizosetshenziswa endaweni yokubhukuda kunikezwa
Isipholisa ngesandla / isifuba seqhwa sokugcina iziphuzo zibanda eduze ne-pool noma ohambweni sihlinzekelwe ukusetshenziswa kwezivakashi
Isibani esiphuthumayo (uphahla lwasekhishini) sivuleka ngokuzenzakalelayo uma ugesi ucisha ebusuku. Amathoshi nawo ahlinzekwa.
Isicishamlilo, ikhithi yokuphepha kanye nempahla yosizo lokuqala endlini
Isihlalo semoto (sezimoto) sitholakala ekhabetheni lokuwasha eliphezulu
Azikho izinkokhelo zikagesi ezengeziwe ezizokhokhiswa ezivakashini (sicela ukuhloniphe lokhu, njengoba ezinye izindawo eziqashiswayo eziningi zibiza imali eyengeziwe kagesi, futhi singathanda ukukugwema ukudlulisela lokhu kubavakashi)
Ukupheka endlini kuyatholakala uma ucelwa
Umakhalekhukhwini wendawo uhlinzekwa ngesicelo (izingcingo zendawo kuphela sicela)
Into engcono kakhulu ngeCasa Romantica nguJulio Jaime! Uyatholakala 24/7 kuzivakashi, futhi angasiza ngezinto zokuhamba, izincomo zendawo, izinkambo, izimo eziphuthumayo, nanoma yini enye ongase uyidinge! Uzobona igama lakhe lishiwo kaningi kumazwana ezivakashi ezidlule, futhi nakuba siziqhenya ngokunikeza zonke izinto ezibalwe ngenhla, akungabazeki ukuthi ukuba noJulio njengesivakashi esizinikele ngokugcwele yikona okusetha i-Casa ngempela. I-Romantica ihluke!
Konke lokhu kusemgwaqweni ongcono kakhulu e-Granada, ibhulokhi elilodwa nje ukusuka e-San Francisco Convent futhi endaweni yokuhlala efiseleka kakhulu edolobheni. Omakhelwane bavame ukuba ngaphandle bavakashele izihlalo ezinyakazayo, okunikeza ungqimba olwengeziwe lokuphepha nobungane endaweni, futhi sicela izivakashi ukuthi zihloniphe omakhelwane bethu abahle.
Emibhangqwaneni engalidingi ikamelo lokulala lesibili, umbhede we-sala ongaphansi ungabekwa ukuze unikeze indawo yokuhlala yesibili eyingqayizivele / igumbi le-TV eline-air conditioning.
Siyaqaphela ukuthi amanye ala maphoyinti ezinhlamvu angase abonakale esezingeni kubahambi abaningi, kodwa akunjalo ngaso sonke isikhathi eNicaragua. Ngemva kokuqasha cishe amakhaya namahhotela amahle kakhulu angama-20 eGranada, sashaqeka lokho okwakubhekwa “njengekhishi eligcwele” (ipuleti elishisayo elingenazo izitsha, ihhavini noma isitofu ngama-$300/ubusuku) noma “ubuthongo obumnandi” (ubukhulu kakhulu). umatilasi omncane ophansi) noma “ukubaleka ngasese” (izinja ezi-2 endlini ezingazange zidalulwe). Ngamanye amazwi, izithombe nezincazelo zingakhohlisa, futhi senze konke okusemandleni ethu ukuvala lezo zikhala futhi sinikeze okuhlangenwe nakho okuthembekile nokujabulisayo kwezivakashi e-Casa Romantica. Sicabanga ukuthi izibuyekezo ze-Casa Romantica zisho okungcono kakhulu, kodwa lawa amaphuzu abalulekile esingawaveza, ngakho sikhuthaza izivakashi zethu ukuthi zibuze kunoma yiliphi ihhotela noma ikhaya nganoma yini ethile ebalulekile kuwe esikhundleni sokuthatha noma yini ngaphambi kohambo lwakho.
**Sicela uqaphele ukuthi zonke izakhiwo zamakholoni (amakhaya namahhotela) e-Nicaragua ayindawo evulekile kakhulu, futhi isikhala esincane esimboziwe noma esivalekile. "Uphahla oluvulekile" lwe-Casa Romantica luncane kuneningi, ngakho-ke ingxenye yechibi kuphela ingaphansi kokuvulwa kophahla, kodwa indawo yokuhlala eyinhloko, indawo yokubhukuda kanye nekhishi konke "kunomoya ovulekile". Womabili amakamelo okulala nezindlu zangasese kuvalwe ngokuphelele. Sicela ubheke ingxenye yesithombe ukuze uthole ipulani yaphansi enemininingwane. Lo mqondo ovulekile wenza amakhaya abe nzima ukuwagcina ehlanzekile, ikakhulukazi ngenkathi yezimvula. Nakuba sinencekukazi ekhethekile e-Casa Romantica, sicela ukhumbule ukuthi amakhaya avulekile ezindaweni ezishisayo ngeke ahlanzeke njengezikhala ezivalekile zaseNyakatho Melika noma eYurophu (Sicela ukukhumbule lokhu lapho uhlala kwenye indawo e-Nicaragua futhi; Kukhona ayikho indlela yokugcina lonke uthuli, izimbungulu noma imisindo lapha... kodwa lokho kuyingxenye yalokho okwenza kube yinto entsha)
Sicela ubheke ingxenye yesithombe ukuze uthole amanani ezokuthutha
I-HDTV ene- Hulu, I-Amazon Prime Video, I-Netflix, ikhebula ye-premium, I-Roku, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
4.85 · 249 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-249
Umgwaqo ongcono kakhulu edolobheni! I-Calle Santa Lucia iseduze nesenzo, futhi isesiyingini sekoloni esiphephile/esihambayo, kodwa iwumgwaqo owodwa kude nama-motos asebusuku kakhulu kanye nokuzwakala kwamahhashi angu-5am emigwaqweni ephithizelayo. Ngaphezulu kwebhulokhi elilodwa ukusuka e-San Francisco Convent, endaweni efiseleka kakhulu e-Granada, emgwaqeni omkhulu onomakhelwane abahle nokuhamba amaminithi angu-5 ukuya cishe kunoma iyiphi indawo eheha izivakashi noma indawo yokudlela edolobheni. I-Calle Santa Lucia "iwumgwaqo ojabulisa kakhulu eGranada" ngokusho kwabashayeli bamatekisi, abahlali nomakhelwane abavakashela ngaphandle emigwaqweni yezinyawo noma ngqo emgwaqeni kuze kube kusihlwa, zonke izinsuku zeviki. Ngokuvamile uzobona izihlalo ezinyakazayo zidonselwa ngaphandle kwendlu ngayinye ukuze omakhelwane bakwazi ukuxoxa bodwa futhi bajabulele umoya ohelezayo kuyilapho bebuka izingane zabo zigibela amabhayisikili futhi zidlala ibhola phezulu naphansi I-Calle Santa Lucía, enikeza umuzwa wobumakhelwane kanye nosendlalelo esengeziwe. ukuphepha kwezivakashi e-Casa Romantica. Indlu icishe ibe ngamabhuloki angu-1.5 empumalanga ye-Hotel Corazon futhi kwesokudla eduze nekhona (empumalanga) kusukela empambanweni yomgwaqo yaseCalle Miguel Cervantes kanye neCalle Santa Lucía (ngezinye izikhathi ebizwa ngokuthi i-Calle Almendro kumamephu aku-inthanethi)
Ingafinyelelwa noma nini, futhi izophendula yonke imilayezo ngokushesha okukhulu. Ulwazi lokuxhumana oluqondile ngeke kwabelwane ngalo ngaphambi kokuqinisekiswa kokubhukha. Umphathi wendawo, isevisi yencekukazi kanye nensizakalo yokuhlanza ama-pool ingaba njalo noma ingenzeki ngendlela izivakashi ezithanda ngayo, kodwa iyatholakala ngaso sonke isikhathi.
Ingafinyelelwa noma nini, futhi izophendula yonke imilayezo ngokushesha okukhulu. Ulwazi lokuxhumana oluqondile ngeke kwabelwane ngalo ngaphambi kokuqinisekiswa kokubhukha. Umphath…
Hlola ezinye izinketho ezise- Granada namaphethelo